बजेट तयारीमा प्रदेश ५ सरकारः चालु बजेटको तुलनामा आकार बढ्ने
पुँजी बजार बैंक/बीमा समाचार
विकाश पराजुली बुटवल, २० वैशाख
प्रदेश-५ सरकार बजेट तयारीमा जुटेको छ । देश कोरोना संक्रमण संग जुधिरहेका बेला सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो ।
प्रदेश योजना आयोगले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिलिङ तयार गरिरहेको छ । बजेटको सिलिङ तयारपछि मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको र त्यहि सिलिङभित्र रहेर योजना बनाउन मन्त्रालयहरूलाई भनिसकिएको आयोग जनाएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले सिलिङ तयारपछि मन्त्रालयहरूमा पठाइएको र त्यही परिधिभित्र कार्यत्रम बनाउनका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताए ।
संघले जेठ १५ मा र प्रदेशले असार १ गते नै बजेट ल्याउने गरेका छन् । त्यही अनुरूप हालको अवस्थालाई ध्यान दिँदै प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउन सकिने गरी बजेटको तयारीमा लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले जानाकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत समालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बजेटको तयारीमा लाग्न मन्त्रालयहरूलाई भनिसकेका छन् । त्यहीअनुरूप गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोजगारी र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेटको तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
बजेट तयार गर्दा बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी मापदण्ड, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना (२०७६/०७७ देखि आव २०८०/०८१) परियोजना बैंकमा समावेश गरिने आयोजनालाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व, प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृति ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी मापदण्डलगायत विषयलाई आधार लिइएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता उत्पादनशील क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयहरूलाई बनाउन भनिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले बताए । अहिलेको परिस्थितीलाई दृष्टिगत गर्दै बजेटको तयार हुन्छ । तर, हामीले साईज घटाउने होइन, बरु केही बढ्न सक्छ उनले भने । उनले कति अंकमा बजेट बन्छ भन्ने बारे अहिले प्रष्ट नभइसकेको समेत बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उनले कोरोनाको अवस्थामा पर्यटन, उद्योग, रोजगार सबै क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै बजेटमार्फत आर्थिक चलायमान हुने गरी बजेटमा योजनाहरू समटिने बताए ।
प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको वस्तुस्थिति अनुसार प्रदेशको अवस्था झल्काइएको छ । त्यहि अनुरूप योजनाहरू अघि सार्ने र न्यून रहेका सूचकहरूलाई माथि उठाइने छ । समग्र ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश-५ औषतमा दोस्रो स्थाना पर्छ । प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३४ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह छन् । ४४ लाख ५८ हजार २५२ जनसंख्या रहेको प्रदेशमा ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । प्रदेशको जनसंख्याले कूल देशको १७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको छ ।
प्रदेशमा २२.७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये ४९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यसका ५२ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिमा बसोबास गर्छन् । प्रदेशमा ९०० बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । तराईका जिल्लामा बैंकहरू बढी र पहाडी जिल्लामा कम रहेका छन् ।
१० लाख जनसंख्या सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा ६ हजारले रोजगार पाएका छन् भने २२६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । प्रदेशमा ९०० उद्योग छन् । जसमा ४० हजारले रोजगारी पाएका छन् । धेरै उद्योग भएको प्रदेशमध्ये ५ नम्बर दोस्रोमा पर्छ । प्रदेशमा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी पुगेको छ । ६२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच छ, जुन ४ औं स्थानमा पर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २०, २०७७, १३:२१:००